Ianaro ny momba ny lozisialy maimaim-poana sy ny GNU / Linux nefa tsy apetrakao | Avy amin'ny Linux
Mianara rindrambaiko maimaim-poana sy GNU / Linux: Tsy mametraka na inona na inona.
Am-polony taona maro lasa izay rehefa nipoitra ny Hetsika Rindrambaiko Maimaimpoana ary nanangana ny firaisana tamin'ilay fantatra ankehitriny hoe GNU / Linux, izany hoe, Operating Systems mifototra amin'ny Linux sy programa voalamina eo ambanin'ny filozofia GNU.
Ary amin'izao fotoana izao ny famoronana, fampiasana ary fanaparitahana ny Free Software sy ny GNU / Linux dia tazomin'ny Hetsika "Techno-social", vondrom-piarahamonina vonona hanome fahafaham-po ny filàna tetikasa maimaim-poana sy maimaim-poana. talohan'ny fampiroboroboana ny rindrambaiko tsy miankina maro an'isa, hamerenana izany vanim-potoana volamena an'ny lozisialy izay niarahan'ny fampandrosoana ny solosaina voalohany sy ny programa informatika.
1.1 Taompolo taonan'ny taona 50/60
1.2 Taompolo taonan'ny taona 70/90
1.4 ianarantsika avy
2.1 Toerana teôria
2.2 Toerana azo ampiharina
2.3 Teknolojia ilaina
Taompolo taonan'ny taona 50/60
Manodidina ny taona 50/60 dia mpikambana ao amin'ny informatika informatika tamin'izany fotoana izany mandrafitra ireo mpahay siansa, akademika ary vondrona mpikaroka mitovy amin'izany, izay niara-niasa tamin'ny tsirairay, izy ireo dia nanao ny ankamaroan'ny rindrambaiko noforonina ho toy ny vondrom-piarahamonina.
Ary nozaraina izy ireo (Operating Systems, Programs and Source Codes) miaraka amin'ny fanampian'ny vondrona mpampiasa azy ireo, izy rehetra miaraka amin'ny tanjona fa azo ovaina izy ireo hahatratra ny fandaminana ilaina sy / na ny fanatsarana.
Taompolo an'ny 70 / 90
Tamin'ny taona 70 dia nanomboka nivadika io fironana io, hialana amin'ireo solosaina lehibe sy lafo vidy ao amin'ny ivon-toeran'ireo anjerimanontolo sy ireo orinasam-panjakana miaraka amin'ireo mpikambana miaraka amin'ny asa fiaraha-miasa miaraka amin'ny Unix-like Operating Systems (mpampiasa maro sy asa maro) amin'ireo vondrona asa kely kokoa any amin'ny ivon-toerana famotopotorana tsy miankina, miaraka amn'ny Operating Systems.
Rafitra miasa manokana izay mihabe ny fameperana marika, copyright, leasing, licensing, ankoatry ny zavatra maro hafa, izay nametra ny fampiasana malalaka sy malalaka an'izany.
Fa amin'izao andro izao amin'ity ady atao amin'ny rindrambaiko tompona sy mihidy ity, isan'andro dia olona maro kokoa ao amin'ny sehatr'asa (trano) sy matihanina (asa) no manomboka na miverina am-kery amin'ny fampiasana ny Free Software sy GNU / Linux.
Fa raha fintinina, ny History of Free Software ary manokana ny GNU / Linux dia mandalo ireo hetsika fantatry ny Richard Stallman tamin'ny taona 1984 rehefa namorona ny tetikasa GNU sy Linus Torvalds izy tamin'ny 1991 rehefa nanoratra kernel toa an'i Unix ho an'ny solosaina tamin'izany fotoana izany.
Ny fanomezana vokatry ny fampifangaroana ireo tetik'asa roa dia Rafitra miasa feno antsoina hoe GNU / Linux, fa karazana Unix izy io ary azo alefa amin'ny solosaina an-trano (PC) tamin'izany fotoana izany. Ary mahatratra anio izay ampifanarahana amin'ny maritrano trano, orinasa ary fikarohana marobe.
Ary ankehitriny amin'ny fahombiazan'ny PC ankehitriny, nahatratra ny trano ny tambabe ataon'izy ireo noho ny vidin'ny Hardware mora vidy, ary ny filàna mitombo mba hampihenana ny fandaniana amin'ny fampiasana, fikojakojana ary fanavaozana ny lozisialy tsy miankina, izay nanome azy ireo fotoana iray mahafinaritra ho an'ny Free Software sy GNU / Linux hananana toerana mendri-kaja ao anatin'ity dingana vaovao eo amin'ny fiarahamonim-baovao ity.
Saingy, mihoatra ny fiheverana ny vidiny na ny fampiasa eo amin'ny rindrambaiko tsy miankina, Ny rindrambaiko maimaimpoana dia mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny zom-pirenena fa tsy amin'ny orinasa, manohana kokoa ny maoderina tsy misy fitsarana an-tendrony ny fahalalahana mamorona, mampiasa, fanaparitahana, mianatra ary mampifanaraka ny fahalalana.
Ary amin'izao fotoana izay izao Ny rindrambaiko maimaimpoana dia mifanentana tanteraka amin'ireo fahalalahana na fitsipika efatra (4) an'ity filàn'ny olom-pirenena tena ilaina ity. Aleo tadidintsika fa ny fahalalahana efatra (4) an'ny Free Software dia:
Noho izany, ny fianarana mampiasa sy mampiasa marimaritra iraisana rindrambaiko Maimaim-poana araka izay tratra dia manome fotoana iray sy filàna be loatra. ka ny ampahany lehibe amin'ny fiarahamonin'olombelona izay tsy ankasitrahan'ity rafitra ity dia afaka mijanona am-panetren-tena amin'ny maoderina ara-teknolojia nefa tsy manadino ny fahaverezan'ny zon'izy ireo hanana ny fiainana manokana, ny filaminana ary ny fahalalahan'ny tsirairay sy ny fiaraha-monina.
Azo antoka fa maro amin'ireo olona vao manomboka sy vaovao amin'ny sehatry ny SL sy GNU / Linux, angamba maro no tsy lamaody na te hahafanta-javatra, mbola Ireo mpampiasa nentim-paharazana an'ny Private Operating Systems (Windows / MacOS) dia manomboka eto noho ny famakiana be dia be hita ao amin'ny SL sy GNU / Linux amin'ireo tranokala an'arivony na an-tapitrisany (Blog, Magazines, Forums) manam-pahaizana manokana momba io lohahevitra io., na satria nisy namanao na mpiara-miasa taminao nilaza fa ao an-trano na any am-piasana izy ireo no mampiasa azy.
Ary amin'ity dingana kely ity dia angamba maro no misintona sy mametraka GNU / Linux Distro ho rafitra miasa tokana na roa ao amin'ny masinin'izy ireo hiditra ao amin'ilay lohahevitra, izay sady tsy tsara no tsy ratsy. Saingy amin'ny zavatra niainako ny tsara indrindra hahatratrarana tetezamita tena izy sy fifindra-monina farany mankany SL sy GNU / Linux dia mandalo dingana 2 alohan'ny fananganana farany.
Ny voalohany dia ny fampiasana lozisialy maimaim-poana (Programme GNU) be dia be ao amin'ireo Rafitra fiasa ananantsika ary avy eo dia miroso amin'ny faharoa izay miresaka momba ny fahazarana sy mametaka ny teknolojia ao amin'ilay faritra nefa tsy mametraka na inona na inona amin'ny fomba voafaritra na mahery vaika, izany hoe dia, ny fampiasana azy nefa tsy mametraka azy. Ary ho an'izay dia misy tranonkala sy teknolojia ilaina sasany izay afaka manompo anay amin'izany, anisan'izany ny:
Ireo tranonkala ireo dia mifantoka amin'ny fikarohana ny GNU / Linux Distro amin'izao fotoana izao na amin'ny an-tsipiriany, amin'ny sehatra teknika be miaraka amin'ny famakafakana teknika lehibe sy ilaina amin'izy ireo. Izay manamora ny fianarana ara-potoana momba izay Distro hampiasaina na manomboka hampiasaina nefa tsy misy fahasarotana na fisalasalana be.
Lisitra fizarana Linux
Toerana azo ampiharina
Ireo tranonkala ireo dia mifantoka amin'ny famelana antsika hifandray amin'ny Internet sy amin'ny fomba tena izy miaraka amin'ny GNU / Linux Distros tsy tambo isaina sy ny fampiharana azy amin'ny fomba mitovy amin'izany raha toa ka napetraka ao amin'ny solosainantsika izany mba hampitomboana ny haavon'ny tena traikefantsika mpampiasa amin'ireo vokatra voavolavola ireo.
Betsaka ny haitao virtoaly azo alaina ao amin'ny GNU / Linux World sy ireo rafitra miasa tsy miankina toa ny MS Windows na Mac OS, saingy tsy misy mora apetraka sy ampiasaina ho VirtualBox. Ity sy ireo haitao hafa mitovy amin'izany dia mamela ny mpampiasa hanatanteraka (hamerina) ny fametrahana sy fampiasana ireo GNU / Linux Distros isan-karazany amin'ny fomba tena 100% nefa tsy mila manova tanteraka ny fiasan'ny Rafitra miasa misy azy ireo ankehitriny.
Ny maoderina teknolojia ankehitriny dia mazàna manokana noho ny halafosany, ny fetrany ary ny fatiantoka ratsy amin'ny fampiasana ny lozisialy tsy miankina, nanampy ny fanararaotana diso ataon'izy ireo avy amin'ny Governemanta na ireo sehatra ara-toekarena izay manandrana modely, manara-maso na mifehy ny valalabemandry amin'ny alalàn'izy ireo.
Fa ny Ny lozisialy maimaim-poana sy ny GNU / Linux dia manome antsika fotoana hitazomana ny fahafaha-miaina, ny safidy iray hafa izay ampahany manan-danja amin'ny rindrambaiko ankehitriny no mivoatra hatrany ivelan'ny orinasa sy ny faritra ara-barotra., izany hoe, mivoatra tsirairay sy iarahan'ny olom-pirenena afaka amin'ny tombontsoana maloto.
Mba hampifandanjana ny fahafaham-po sy ny fahamendrehana izay ampiasain'ny Rindrambaiko dia tsy manitsakitsaka ny zontsika hanana fiainana manokana, fiarovana ary fahalalahana isam-batan'olona sy iraisana, afaka ampifanarahan'ny olona betsaka araka izay azo atao sy amin'ny tanjona rehetra, ary ny fitehirizana ny rindrambaiko Maimaimpoana sy ny GNU / Linux dia voaro hatrany rehefa mandeha ny fotoana, izany hoe ilay Rindrambaiko azo ampiasaina, hianarana, hizarana ary hanatsarana azy rehetra.
Manantena izahay fa ireo rohy omena amin'ity publication ity dia manampy amin'ny fanaparitahana ny fahalalana sy ny fampiasana ny Free Software sy GNU / Linux tsy misy fahasarotana lehibe mahatonga ireo mpampiasa vaovao handà izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ianaro ny momba ny lozisialy maimaim-poana sy ny GNU / Linux nefa tsy mila apetraka akory
Jiminy Cricket dia hoy izy:
"Efa am-polony taona maro izay no nivoahan'ny Free Software Movement ary taty aoriana dia namorona ny firaisana amin'ny antsoina hoe GNU / Linux, izany hoe, ny Operating Systems sy ny programa mifototra amin'ny Linux izay niorina tamin'ny filozofia GNU."
Inona no nitranga tamin'izay?
Fa maninona ianao no mampiditra olona ambany toy izany raha tsy milaza ny zava-nitranga "efa am-polony taona lasa izay" ianao?
Valiny tamin'i Pepito Grillo
Ny zava-nitranga dia izay nitranga tamin'ny famintinana ny andalana faharoa ary amin'ny antsipiriany amin'ny teboka 1.1, 1.2 ary 1.3, saingy maimaim-poana sy manokana ny fahatakarana, noho izany, tsy misy olana raha mandika azy manokana ianao.
Misaotra ihany fa namaky sy naneho hevitra momba ilay lahatsoratra.
Sysadmin: Ny kanton'ny maha-Administrator ny rafitra sy ny mpizara